Inona no ilain'ny Nexus 2015 toy ny taloha? | Androidsis
Inona no ilain'ny Nexus 2015 toy ny taloha?
alexis martinez | | Huawei, LG, Rohy
Mazava fa ny telefaona finday farany Google dia tsy nahatonga ny fanantenana ny tadiavin'ilay orinasa mihitsy. Ny terminal 6 ″ dia tsy namidy araka izay tadiavin'izy ireo ary very ny fotony ny marika Nexus. Dimy ambin'ny folo andro fotsiny isika izao no miala amin'ny hetsika Google manandanja indrindra, Google I / O 2015, ary toy ny mitranga isan-taona, dia tokony haseho ny terminal Nexus vaovao.
Iray? Izay no hiditra amin'ny dobo rehetra, saingy na eo aza izany, misy ny tsaho fa hanolotra fitaovana Nexus roa i Google mandritra ny hetsika. Mpanamboatra no ho Huawei izay hanamboatra ny terminal faran'izay betsaka indrindra ary ny LG izay hamokatra kinova super-vitamina an'ny Nexus 5. Raha nitranga izany dia sambany teo amin'ny tantara no namoaka fantsona roa teo ambanin'ny marika Nexus ny Mountain Viewers. Fa, Inona no ilain'ny Nexus 2015 ho toy ny taloha ?
Raha toa ka nanana zavatra ny faritra Nexus dia ny terminal eo anelanelany misy famaritana tsara sy amin'ny vidiny mirary ho an'ny mpampiasa, ankoatry ny fanohanana mandritra ny 2 taona farafahakeliny ny fanavaozana ny rafi-piasan'ny Android. Anisan'ireo zavatra hitantsika ny fisidinan'ny terminal eo ambanin'ny rafitra fandidiana hatramin'ny namoronana azy ho an'ilay fitaovana. Saingy tsy ny zava-drehetra mifandraika amin'ny terminal an'i Nexus no zavatra tsara satria tsy nanana fakantsary fakantsary izay tsy mifanaraka amin'ny mpifanandrina hafa aminy ilay fitaovana.
Na dia nihena tsikelikely aza ny Nexus 6 hatramin'ny nivarotany azy dia nivoaka tamin'ny fitaovana izay noheverin'ny maro ho lafo be ilay fitaovana. Fa raha miverina amin'ny lasa isika dia ho hitantsika fa nisy ny terminal Nexus lafo vidy, toa ny Galaxy Nexus izay namidy amina € 700 € maimaim-poana. Saingy na izany aza, ny Motorola Nexus amin'izao fotoana izao dia nifanehitra tamin'ny fifaninanana maro toa ny OnePlus One. Fantsona sinoa azontsika sokajiana ho »terminal misy ny votoatin'ny Nexus» satria ny paikadin'ny orinasa sinoa dia mitovy amin'ny nataon'i Google miaraka amin'ny Nexus 4 sy Nexus 5 taloha.
Na izany aza, dia nanjavona ilay votoatin'ny terminal tsara sy tsara ary mora vidy nefa Google te-ho sitrana miaraka amin'ny Nexus vaovao 2015. Mba hanaovana izany, araka ny soso-kevitr'ireo tsaho, miankina amin'ny LG indray izy hamoaka fitaovana miaraka amin'ny Efijery 5,2 ″ santimetatra ary miaraka amina fanapahan-kevitra 1080 x 1920 teboka. Araka ny hitantsika dia mamela ny efijery misy famaritana 2K sy fanapahan-kevitra hafa avo kokoa izy io, azo antoka fa hampihena ny vidin'ny terminal. Teboka iray hafa hampihena ny vidiny dia ny processeur-ny izay mety ho a Snapdragon 620 amin'ny Fahatsiarovana RAM 4 GB.
Na izany aza, misy ny famaritana mendrika ny avo lenta, toy ny RAM memory, izay hitovy amin'ny an'ny terminal avo lenta, hitantsika koa ny ny bateria dia mety ho 5200 mah, hampiditra microUSB sy USB-C, famahanana haingana ary fakantsary fakana sary roa tsara, ny aoriana sy ny lehibe an'ny 13 Megapixels miaraka amina f / 1.8 aperture sy Dual Flash LED izay hanoratra ao amin'ny 4K amin'ny 30fps ary FullHD amin'ny 60 fps ary fakan-tsary 8 MP eo aloha izay handraikitra amin'ny 1080p amin'ny 60 fps tahaka ny fakantsary lehibe. Raha toa ka tsy dia hainao loatra ireo toetra ireo dia hitanay fa ho voaro amin'ny alàlan'ny teknolojia Gorilla Glass 4 ny efijeryo ary hitahiry tahiry anatiny 64 GB, ho an'ny rehetra vidin'ny € 400.
Raha mijery amin'ny antsipiriany isika dia mahita ny fomba nanirian'i Google sy LG hampihena ny vidiny amin'ny processeur, izay eo anelanelany sy ny efijery izay tsy iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena fa azo antoka fa tsy manana kalitao izany. Raha toa izao ny kinova LG dia hiverina amin'ny niandohany ny laharan'ny Nexus, finday mahery sy tsara tarehy ary takatry ny vidiny.
Mikasika ny kinova fihenam-bidy indrindra amin'ny laharan'ny Nexus, dia hahita fitaovana iray izay eo amin'ny toerana avo indrindra amin'ny tsenan'ny Android izahay. Azo antoka fa hamerina ny paikadin'ny Motorola Nexus 6 ihany i Google ary hahita fitaovana miaraka amin'ny haitao farany indrindra isika.
Toy ny manondro ny tsaho, hahita terminal ny 6 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana QuadHD, mpanodina Snapdragon 810 eo akaikiny Fahatsiarovana RAM 4 GB ary fakantsary lehibe misy 20,7 Megapixels. Huawei sy Google dia hitondra ny iray amin'ireo terminal farany tsara indrindra any an-tsena.
Tsy tena fantatsika raha toa ka toy izao ny farany, fa manantena izahay fa farafaharatsiny amin'ny tranga misy amin'ny terminal LG dia ho tanteraka ny tsaho ary noho izany ny Nexus dia hahazo indray ny fotony izay nilaozany tamin'ny taon-dasa. Ary ianao, Ahoana ny hevitrao momba izany ? , Inona no ilain'ny Nexus 2015 tahaka ny taloha?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Inona no ilain'ny Nexus 2015 toy ny taloha?
Miaraka amin'ireo masontsivana ireo ary raha toa ka marina izany dia ho ny terminal manaraka ahy tsy misy fisalasalana ny fahaizan'ny bateria.
Diego S. dia hoy izy:
Ary ny vidiny izay nolazain'izy ireo fa tena tsara, mora vidy kokoa noho ny Nexus 6
Valiny tamin'i Diego S.